Ny rindranasa dimy tsara indrindra ho an'ny Google Home | Androidsis
Tonga tao Espana ihany ny Google Home, izay efa amidy efa herinandro mahery. Ny mpandaha-teny nataon'i Google dia iray amin'ireo vokatra be mpiresaka indrindra eny an-tsena. Ankoatr'izay, singa iray lehibe amin'ny paikadin'ny orinasa ny filokana amin'ny trano an-tsaina. Mba hahazoana bebe kokoa amin'ity mpandahateny ity dia tsara ny mametraka andiana fampiharana.
Amin'izany fomba izany afaka mampiasa tsara kokoa ny Google Home na Home Mini isika, raha toa ka liana amin'ny mpandahateny rehetra an'ny orinasa amerikana izahay. Indrindra ankehitriny fa efa miteny sy mahatakatra Espaniôla izy ireo.
Ireo rindranasa rehetra ireo dia hita ao amin'ny Play Store. Ka tsy ho olana ny misintona azy ireo. Misaotra azy ireo fa ho tsotra kokoa ny asa sasany na azonao atao tsara kokoa ny mandray an'io mpandahateny mpandaha-teny avy amin'ny orinasa io. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Ny rindranasa tsara indrindra ahafahana mandefa atiny amin'ny streaming ary azonay ampiasaina tsy misy olana amin'ny Google Home. Indrindra rehefa mandinika ny habetsahan'ny atiny ianaos misy amin'ny Netflix. Ho fanampin'izay, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manana kaonty amin'ny serivisy streaming malaza, koa amin'izany dia mahazo bebe kokoa amin'ity kaonty ity ianao amin'ny alàlan'ity mpandahateny ity amin'ity tranga ity.
Maimaimpoana ny fampidinana ny app Netflix ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay dia momba ny fisafidianana ny karazana kaonty raha sanatria ka tsy manana izany ianao. Raha efa manana izany ianao dia mila mamantatra ny tenanao fotsiny mba hankafizanao ny atiny.
Iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra azonao ampiasaina raha nividy ny maodely Google Home izay efa misy ianao anio. Na dia tsy maintsy lazaina aza fa fampiharana somary sarotra io. Izay isika mamela dia ny firaketana ny baikon'ny feo ampiasaina amin'ny mpandahateny sy ny mpanampy Google. Amin'izany no ahafahantsika manatanteraka karazana asa rehetra, miaraka amin'ny baiko izay noraketintsika tamin'ny fomba sarobidy. Ho fanampin'izany, ny fampiharana dia ahafahantsika manatsara na mamaritra betsaka ireo baiko noforoninay, noho izany dia hamboarina tsara amin'ny fampiasana izay hataontsika. Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny mpanampy hafa eny an-tsena toa an'i Alexa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Manana kinova maimaimpoana sy kinova karama izahay. Miankina amin'ny fampiasana izay homenao azy io dia hisy iray izay mety kokoa aminao.
Iray amin'ireo fiasa mahazatra indrindra tanterahina miaraka amin'ny Google Home ny fihainoana mozika. Safidy tsara hodinihina ny Google Play Music, satria manana katalaogin'ny mozika goavambe hita ao amin'ilay fampiharana izahay. Noho izany, afaka mihaino ny mozika ankafizintsika any an-trano isika amin'ny alàlan'ny fanontaniantsika ilay mpandahateny amin'ny Google Assistant. Ho fanampin'izany, afaka mamorona lisitra playlist izahay ary mangataka aminao hamerina azy ireo, na hanatanteraka fikarohana hikarohana rakikira, mpihira na hira manokana.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay. Tsy doka manelingelina izy ireo.
Jiro maranitra Philips dia fanampiny tsara ao amin'ny Google Home. Amin'ny ampahany lehibe satria ho azonao atao ny mifehy azy ireo amin'ny fomba tsotra amin'ny fampiasana ilay mpanampy. Ireo jiro ireo dia ahafahanao manova loko, amin'ny tranga sasany dia manana loko maro samihafa izahay, mifehy ny hamafiny ary manova azy ireo amin'ny loko manokana, na manova ny fomba naseho azy ireo. Araka izany, ampifanarahintsika amin'ny toe-javatra tadiavintsika amin'izay fotoana izay any an-trano, na mijery sarimihetsika isika, na amin'ny fiaraha-misakafo hariva.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Ho fanampin'izay, tsy manana fividianana na dokam-barotra izahay ao anatiny. Raha manana an'ireto jiro ireto ianao ao an-trano dia io no safidy tsara indrindra azonao ampiasaina, dia ho ahazoana aina kokoa ny mifehy azy ireo.
Fampiasana tsara hafa ho an'ny Google Home dia izany manorata anay, toy ny lisitra fiantsenana na zavatra tsy maintsy ataontsika mandritra ny tontolo andro, miampy fampahatsiahivana. Izany no mahatonga ny fampiharana fanamarihana tsara atao safidy tsara. Satria hanamora kokoa ity fizotrany ity izy ireo ary noho izany dia mandray an-tsoratra haingana sy mahomby kokoa ilay mpanampy. Ho fanampin'izany, hananantsika azy ireo koa amin'ny finday avo lenta amin'ny fotoana rehetra. Ity fampiharana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, noho izany dia mendrika ny sintonina.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Ny fampiharana fanamarihana hafa dia hitovizany ampiasaina aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsara indrindra ho an'ny Google Home
Lalao Android miorina amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra
Xiaomi dia hanokatra fivarotana vaovao roa any Espana amin'ny 7 Jolay